Waa Kuma Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Dhulka Ugu Tuuray Ninkii Conor McGregor? | Berberatoday.com
Las Vegas(Berberatoday.com)-Wuxuu ahaa bandhig la isku bowdya-qaawinayey oo xeel dagaalna la isugu awood sheeganayey, laakinse guusha Khabib Nurmagomedov uu ka gaadhay Conor McGregor, dagaalkii ay isaga hor yimaadeen Las Vegas, ayaa iska beddelay habeen cayaareed oo cajiib ah, isagoo isku beddelay mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muranka badan taariikhda UFC.
Laakinse sidee buu ku gaadhay heerkan ah inuu ka mid noqdo ragga magaca weyn ku leh cayaaraha dagaalka?
Marka lagu daro guusha uu ka gaadhay McGregor, wuxuu galay 27 dagaal muddo 10 sano ah oo uu cayaartan ku jiray, dhamaantoodna wuu ku guulaystay.
Si uu heerkaas u gaadho waxaa ka horreeyey marxalado uu soo maray.
Ma aha qofkii ugu horreeyey ee Ruush ah ee ku guulaysta UFC, laakin sidoo kale waa qofkii ugu horreeyey ee muslim ah ee guushaas gaadha.
Aabihiis Abdulmanap waa ruug caddaa magac ku leh milateriga oo baray legdenka – waana cayaar aad looga cayaaro gobolkaas Ruushka ku yaalla – wixii ka dambeeya marka ay ilmuhu gaadhaan da’da 8aad.
Abdulmanap wuxuu dabaqa hoose ee dhismaha uu degganaa ee magaalada Kirovaul uu ka dhigay meel jidh dhiska lagu sameeyo (Gym), halkaasoo Nurmagomedov uu ka billaabay inuu si dhab ah u barto xirfadda dagaalka.
aabihiis kama uusan baran legdan oo qudha ee wuxuu ka bartay Judo iyo Sambo, oo ah xirfad dagaal oo asal ahan laga soo min guuriyey milateriga Ruushka 1920 meeyadii.
Bishii May, wuxuu garaacay Abel Trujillo, isagoo markaa dhigayey rikoodhka cusub ee UFC ee muddada ugu dhakhsiyaha badan ee qof cayaar looga saaro. 21 goor ayuu ku guulaystay 27kii goor ee uu cayaaray.
Ka dib, bishii Sibteembar wuxuu garaacay Pat Healy oo Maraykan u dhashay, ayadoo guusha lagu siiyey ga’aan ay garsoorayaasha oo dhan isku raaceen. Dana white oo ah guddoomiyaha UFC ayaa laga soo sheegay inay tidhi “wiilkan waa mid xiiso leh. waxyaabo badan ayaan filayaa in aan wada samayn doonno wiilkan”.
Sidaasoo ay tahay, Nurmagomedov wuxuu sii waday inuu cayaaro, si aan toos ahayn, dhaawacyo is xigxigay ayaa la soo dersay, kuwaasoo baajiyey dhowr sanadood oo uu cayaari lahaa, niyad jabna ku beeray.
Holloway qudhiisana waxaa lagu tilmaamay inuusamn jir ahaan diyaarsanayn, wuxuuna miisaankiisa dhimay oo uu gaadhsiiyey heer uusan ku bedqabin. Isna waxaa lagu beddelay Al Iaquinta, waxaase uu noqday mid aan la barbar dhigi karin Nurmagomedov, bacdamaa uu aad uga miisaan cuslaa.
Lama siin suunka guusha, lacagtii uu heli lahaana waa laga xayiray, ayadoo ku xidhan natiijada baadhitaanka wixii dhacay cayaarta ka dib